च्याम्पियन्स लिगको 'ड्र' आज हुँदै, कसको भिडन्त कोसँग ?
च्याम्पियन्स लिगको ‘ड्र’ आज हुँदै, कसको भिडन्त कोसँग ?
कोशी अनलाइन बिहिबार, १४ भदौ, २०७५ मा प्रकाशित
विराटनगर, भदौ १४
युरोपका शीर्ष क्लबहरूले खेल्ने युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको ड्र आज हुँदैछ । सिजन २०१८÷१९ का लागि समूह चरणको ड्र नेपाली समयअनुसार आज राति साढे १२ बजे हुँदैछ ।
मोनाकोमा एक भव्य सभाबीच हुने ड्रबाट कुन टिम कोसँग पर्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ । यसपटक च्याम्पियन्स लिगको भिडन्तमा स्पेनिस ला लिगाका शीर्ष चार टोली परेका छन् । कूल ३२ टोलीलाई ८ समूहमा विभाजन गरेर गरिने ड्रमा एक समूहमा चार टोली हुनेछन् ।
ड्रका लागि चार पट विभाजन गरिएको हुन्छ । चार पटबाट समूह चरणको ड्र घोषणा हुनेछ ।
पट– १ मा रहने टोली टोली :
बार्सिलोना (स्पेन), रियल मड्रिड (स्पेन) एथ्लेटिको मड्रिड (स्पेन), बार्यन म्युनिख (जर्मनी) म्यान्चेस्टर सिटी (इंग्ल्यान्ड), युभेन्टस (इटाली), पिएसजी (फ्रान्स) र लोकोमोटिभ मस्को (रसिया)
पट–२ मा पर्ने टोली :
बोरुसिया डर्टमुन्ड (जर्मनी), पोर्टो (पोर्चुगल), म्यान्चेस्टर युनाइटेड (इंग्ल्यान्ड), शाख्तार डोनेस्क (युक्रेन) बेन्फिका (पोर्चुगल) वा पिएओके (ग्रीस) मध्ये कुनै एक, नापोली (इटाली), टोटनह्याम (इंग्ल्यान्ड) र रोमा (इटाली)
पट–३ मा रहेका टोली :
लिभरपुल (इंग्ल्यान्ड), साल्के (जर्मनी), ओलम्पिक लियोन (फ्रान्स), मोनाको (फ्रान्स), सजवर्ग (अस्ट्रिया) र रेड स्टारमध्ये एक, आइएक्स (नेदरल्यान्ड), सिएसकेए मस्को (रसियापी एसभी–नेदरल्यान्ड वा बाटे बेलुरसमध्ये एक)
पट–४ मा रहने टोली :
भ्यालेन्सिया (स्पेन), भिक्टोरिया प्लाजेन (चेक रिपब्लिक) ब्रुग (बेल्जियम), गालाटासरे (टर्की), योङ ब्वाइज (स्वीट्जरल्यान्ड), इन्टर मिलान (इटाली), १८९९ हफिनहेइम (जर्मनी), एइके एथेन्स (ग्रीस)
आज कोरोनाबाट २ जनाको मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या आठ पुग्यो
आज १ सय ६६ जनामा कोरोना पुष्टि, पन्ध्र सय नाघ्यो संक्रमितको संख्या
आज एक जनाले मात्र जिते कोरोना
कोरोना संक्रमितको परिवार र छिमेकीलाई समेत विभेद !
बिद्युतिय सवारीमा भन्सार बढाएको भन्दै नाडाको आपत्ति